'मदन-आश्रितको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौँ !'
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जननेता मदन भण्डारीको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । मदनआश्रित स्मृति दिवसमा डा. भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत मदन-आश्रितको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्ने तर्फभन्दा उनीहरुको दुर्घटना अथवा हत्या के हो भन्ने रहस्य सुल्झाउन लाग्नुपर्ने बताए ।
मदनपत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएको र उनका उत्तराधिकारी दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उक्त रहस्य सुल्झाउनु पर्ने डा. भट्टराईको तर्क छ । अहिले उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानविन गरेर त्यो रहस्यको अन्तिम निर्क्योल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
डा. भट्टराईले लेखेका छन्, '२०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुभएका नेताहरू मदन–आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन ! मदनपत्नी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रम भएको बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानविन गरेर त्यो रहस्यको अन्तिम निर्क्योल गरौँ ।'
रहस्यलाई टुङ्ग्याउनका लागि अहिले सबैले सार्थक पहल गर्नुपर्ने डा. भट्टराईको धारणा छ । उनले रहस्य सुल्झाउन तर्फ ध्यान नदिने हो भने उनीहरुको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोड्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति : जेठ ३, २०७८ साेमबार ९:०:२९, अन्तिम अपडेट : जेठ ३, २०७८ साेमबार ९:२:१८